दश लाख युवा परिचालन गरिँदै
काठमाडौँ, १० असोज। सरकारले घोषणा गरेको ‘युवा परिचालन वर्ष’मा १० लाख युवा परिचालन गर्ने तयारी थालेको छ । युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा युवालाई विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गर्न कार्यक्रमको खाका माग गरेको छ । खाका माग गर्न मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको संयोजकत्वमा युवा परिचालन कार्यक्रम मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ..
प्रधानमन्त्री आक्रामक : ‘नेताको बलमा ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारले सरकारलाई बदनाम बनाए’
काठमाडौं, १० असोज । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा समग्र आर्थिक सूचकांक..
पानीजहाज कार्यालय स्थापना भएदेखि नै सुनसान
काठमाडौं, १० असोज । पानीजहाज कार्यालय स्थापना भएको ६ महिना बितिसकेको छ । २०७५ फा..
वडाध्यक्षलाई नै छोइछिटो, पानी खान छुट्टै गिलास
काठमाडौं, १० असोज । गुलरिया नगरपालिका–९ का हरिप्रसाद पासीले भोगेका छुवाछुतका घटन..
दशैंका यात्रुले पाएनन् टिकट
काठमाडौं, १० असोज । दशैं नजिकिँदै जाँदा यात्रुले टिकट नपाएको गुनासो गरेका छन् । ..
बढी शुल्क लिने कलेज सञ्चालकको मन्त्री नै हटाई दिने धम्की
काठमाडौं, १० असोज । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले आफूहरूले हाकाहाकी सरकारले तोकेको भन्दा प्रतिव्यक्ति ७ लाख रुपैयाँ बढी शुल्क लिएको स्वीकारेका छन् । यति मात्र हैन उनीहरूले शुल्क फिर्ता गर्न बाध्य पारे शिक्षामन्त्री नै हटाई दिने धम्की दिएका छन् । रिपोटर्स क्लबमा बिहीबार आयोजित अन्तरक्रियामा निजी मेडिकल कलेजहरूको सचिव समेत रहेका न..
अमेरिकी राजदूत सक्रिय, भेटे देउवा र नेपाललाई
काठमाडौं, १० असोज । नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच ‘भाइचारा’ बनेसँगै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय भएका छन् । उनले बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ नेकपाका विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालसँग भेट गरेका छन् । त्यस क्रममा राजदूत बेरीले पछिल्लो राजन..
नौं हजार नयाँ कर्मचारीको नियुक्तिमा अन्योल
काठमाडौं, १० असोज । कर्मचारी व्यवस्थापनको कानुनी आधार तयार हुन नसक्दा ९ हजार बढी कर्मचारीको नियुक्तिमा अन्योल देखिने भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कानुन बन्न नसक्दा स्थानीय तहका लागि आउँदै गरेका ९ हजार कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा पर्ने देखिएको हो । स्थानीय तहले हालको निजामती सेवा..
सरकारले लगानीमैत्री वातावरणलाई प्राथमिकता दिएको छ: अध्यक्ष दाहाल
बुटवल, ९ असोज । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वदेशी लगानीकर्तालाई स्वदेशमै दिल खोलेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आयोजना गरेको तिलोत्तमा लगानी सम्मेलन २०७६ को आज उद्घाटन गर्नुहुँदै अध्यक्ष दाहालले सरकारले नीति कार..
पहिलोपटक दुर्गमको अग्र्यानिक स्याउ शहरमा
बाजुरा, ९ असोज । पहिलोपटक दुर्गम ठाउँमा फलेको अग्र्यानिक स्याउ जिल्ला बाहिर काठमाडौँ र धनगढी लगिएको छ । बोटमै स्याउ फलेर कुहिने अवस्था भएपछि कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराले ढुवानी अनुदान दिएपछि पहिलोपटक जिल्ला बाहिर शहरी क्षेत्रमा स्याउ जान लागेको कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराका निमित्त कार्यालय प्रमुख गोविन्द सिजापतीले बताउनुभयो । किस..
पर्यटकको सुरक्षामा सक्रिय हुन महानिरीक्षक खनालको प्रहरीलाई निर्देशन
काठमाडौँ, ९ असोज । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० लाई लक्षित गर्दै पर्यटकहरुको सुरक्षामा थप सक्रिय हुन पर्यटक प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । पर्यटक प्रहरी एकाइ भृकुटीमण्डपमा बुधबार पर्यटक प्रहरी एकाइहरुमा कार्यरत प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरुलाई निर्देशन दिँदै उहाँले पर्यटक प्रहरीले सम्पूर्ण देशकै..
ट्रम्पको प्रश्न, ‘के छ नेपालको खबर ?
काठमाडौं, ९ असोज । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पले नेपालको पछिल्लो अवस्थाबरो चासो व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रसंघको ७४ औं महासभामा भाग लिन न्युयोर्क आएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीसँगको संक्षिप्त भेटमा ट्रम्पले नेपालबारे जिज्ञासा राखेका हुन् । रात्रिभोजमा सरिक हुने क्रममा स्वागत गर्दै तस्बिर खिच्ने समयसम्म आपसी कुराकान..
मंसिरसम्ममा जनकपुर–जयनगर रेल चल्ने
धनुषा, ९ असोज । नेपाललाई भारतको राजधानी नयाँदिल्ली, कोलकातालगायत प्रमुख शहरसँग जोड्ने लक्ष्य लिएको रेल सेवा सुचारु हुन सकेको छैन । गत वर्षको असोजदेखि जनकपुरधाम–जयनगर रेल सेवा शुरु हुने चर्चा थियो तर चलेन । रेल चल्न भनेर धेरै पटक मिति तोकिए पनि त्यो केवल चर्चामै सीमित भयो । रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले मंसिरदेखि रेल चल्न..
मेडिकल कलेजका सञ्चालक चाबी बुझाउँछु भन्छन्, सरकारले स्वामित्व लिए के हुन्छ ?
काठमाडौं, ९ असोज । सरकारले विद्यार्थीसँग असुलेको बढी शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको दुई दिनपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले यस शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना नै नलिने धम्की दिएका छन् । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले मेडिकल शिक्षामा..
काठमाडौं, ९ असोज । ९२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने ६ जनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको छ । चन्द्रागिरी नगरपालिका–२ मा रहेको कित्ता नम्बर १०१ को उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नामबाट २०७२ सालमा सुयल हाउजिङ कम्पनीको नाममा गराउने काममा संलग्न रहेका मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख शिवप्रसाद रिम..
आइजिपी खनालको अमेरिका भ्रमण अस्वीकृत, आइजिपीलाई थाहै नदिई एआइजी सरुवा
काठमाडौं, ९ असोज । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) सर्वेन्द्र खनालको अमेरिका भ्रमण अस्वीकृत गरेको छ । उनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले उनको विदेश भ्रमण रोकिदिएको स्रोतले बतायो । हरेक वर्ष २६ देखि २९ अक्टोबरसम्म अमेरिकाको सिकागोमा विश्वका प्रहरी प्रमुखहरूको सम्मेलन हुँदै आएको छ । सम्मेलनमा केही वर्षयता प्रहरी अध..
थानकोट–नागढुङ्गा सडकखण्डमा ओभरटेक गर्न नपाइने
काठमाडौँ, ८ असोज । ट्राफिक प्रहरीले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनलाई चार पटकसम्म जाँच गर्ने भएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले चाडपर्वका बेला निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन घट्न सक्ने सम्भावित घटनालाई लक्षित गरेर बिहान, दिउँसो, साँझ र राति चार पटकसम्म विशेष जाँचको व्यवस्था गर्न लागेको हो । महानगरीय ..
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घमा लोकतान्त्रिक समूह विजयी
काठमाडौँ, ८ असोज। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक समूहको ‘प्यानल’ नै विजयी भएको छ । सङ्घको २७आँै साधारणसभाअन्तर्गत गएराति सम्पन्न निर्वाचनका क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमको ‘प्यानल’ विजयी भएको हो । सङ्घको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद गैरे निर्वाचित हुुनुभएको..
काठमाडौ,८ असोज । वकिल, न्यायाधीश, कर्मचारी र नेता मिलेर काठमाडौंको ९२ रोपनी सरकारी जग्गा हाउजिङको नाममा दर्ता गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले यो प्रकरणमा तीन वकिलसहित पाँचजनालाई पक्राउ गरी मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाको बाँडभञ्ज्याङस्थित ९२ रोपनी दुई आना जग्गा म..
सांसदले पाउने ६ करोड रकम भौतिक पूर्वाधार विकासमा मात्रै खर्च गर्न मिल्ने
काठमाडौ,८ असोज । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक सांसदले पाउने ६ करोड रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार विकासबाहेकका काममा खर्च गर्न नपाइने भएको छ । राजनीतिक दलसम्बद्ध संस्थाहरूलाई सहयोग गर्न नपाइने भएको व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७५ मा दलसम्बद्ध..
शिक्षक सेवा आयोगलाई परीक्षा लिन बाटो खुल्याे
काठमाडौं, ८ असोज । सर्वोच्च अदालतले विषयगत रूपमा लाइसेन्सको परीक्षा व्यवस्थाको माग गरी दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । माध्यमिक तहको विज्ञापन नम्बर ३५–०७६ खारेज गरी कक्षा ११ र १२ मा पढाउने शिक्षकका लागि विषयगत लाइसेन्सको परीक्षाको व्यवस्था गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट..
हुँदै नभएको प्रदेश प्रहरीका लागि करोडौंका गाडी
काठमाडौं, ८ असोज । गठन नै नभएको प्रदेश प्रहरीका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले तीन करोड ३३ लाखका नौवटा गाडी किनेर साढे २ महिनादेखि चौरमा थन्क्याएको छ । बजेट सक्न गत आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर १८ असारमा ३६ लाख ९९ हजारको दरले टाटा कम्पनीका गाडी किनिएका हुन् । प्रदेश प्रहरी नै नबनेका कारण ती गाडी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको चौरमा राखिएका छन्..
विद्युत् चुहावट साढे आठ प्रतिशतमा झार्ने रणनीतिक लक्ष्य
काठमाडौँ, ७ असोज । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चुहावटलाई रणनीतिक रुपमा कम गर्दै जाने लक्ष्य राखेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले तय गरेको योजना शतप्रतिशत कार्यान्वयन भएको खण्डमा चालू आवमा वितरण तर्फको चुहावट आठ दशमलव ५० प्रतिशतमा सीमित हुनेछ । हाल वितरणतर्फको चुहावट ११ दशमलव २८ प्रतिशतमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।..
नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच समझदारी
काठमाडौँ, ७ असोज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच भाइचारा सम्बन्ध स्थापित भएको छ । आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा दुई पार्टीबीच भाइचारा सम्बन्ध स्थापना गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्..
काठमाडौँ, ७ असोज । नेपालीको महान् पर्व दशैँ, तिहार तथा छठका लागि घर जान नयाँ बसपार्कबाट २० हजार यात्रुले अग्रिम बस टिकट लिएका छन् । आइतबारबाट टिकट बुकिङ खुला गरिएकामा नयाँ बसपार्कबाट मात्र दुई दिनमा २० हजार यात्रुले अग्रिम टिकट लिएका हुन् । यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्र..
Page 8 of 183« First«...678910...203040...»Last »
काठमाठौं, २७ कार्तिक । अफ्ताब आलमलाई मुख्य अभियुक्त किटान गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिने रा..
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिमलाई विदा दिनुको यस्तो कारण
काठमाठौं, २७ कार्तिक । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सचिवालय र सल्लाहकार टिममा आ..
३९५ वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमणमा
काठमाडौं, २७ कार्तिक । भारतले लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसहित लिपुलेकको भूभाग गरी तीन सय ..
काठमाठौं, २७ कार्तिक । ठुल्ठूला विकास, निर्माणसम्बन्धी आयोजना र प्राविधिक क्षेत्रमा भ्र..